कुराको त दुखै छैन नि कांग्रेसमा « Jana Aastha News Online
कुराको त दुखै छैन नि कांग्रेसमा
प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०७३, बिहीबार ०७:३०
‘यो के दिन आयो ? कम्युनिष्टहरुले प्रस्ताव ल्याउने र पिछलग्गु बनेर हामीले ताली पिट्नुपर्ने ? नियत ठीक छैन, यसले कांग्रेसलाई सिध्याउँछ ।’
सोमबार कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक शुरु हुनै लागेको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रकाशमान भन्दै थिए, ‘कम्युनिष्टको बुई चढेर कांग्रेस कहाँ पुग्छ ?’
तर, सोमबारको बैठकमा बद्री पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे, धनराज गुरुङ र गगन थापाले पालैपालो महाभियोगलाई आँखा चिम्लिएर पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्न थाले । यसपछि बोल्ने पालो प¥यो गुरुराज घिमिरेको । उनले भने, ‘हिजो लोकमानलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने कुराको प्रस्तावक दल (माओवादी) नै सामेल भएर यो प्रस्ताव आएको छ । फेरि भर्खरै गठबन्धन टुटेको पार्टीसँग मिलेर प्रस्ताव ल्याएको छ । सदनलाई यो कुराको पूर्वसूचना पनि भएन । त्यसैले प्रस्तावको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ ।’
गुरुले यसरी बोल्न थालेपछि अघि बद्री, सुरेन्द्र, धनराज र गगनका कुरा सुनेर मुख बिगारेका प्रकाशमान, रामशरण, मीनेन्द्रहरुले अलिक हेर्न लायकको अनुहार त बनाए । तर, बाँकीचाहिँ गुरुले पनि राखेनन् । भने, ‘हिजो पनि लोकमान अख्तियारको प्रमुख बनाउने उपयुक्त पात्र थिएनन् । उनको भूमिकाबारे उठेका प्रश्न जायज छन् । कांग्रेसले उनलाई बचाउनै पर्छ भन्ने छैन । तर, यो प्रस्ताव कसरी आयो ? यसको उद्देश्य के हो ? गठबन्धन तोड्ने ? अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियालाई अबरुद्ध पार्ने ? संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर जाने बाटोमा गठबन्धन हिँडिरहँदा त्यसलाई विषयान्तर गर्ने काम भएको छ । यसमा समस्या उत्पन्न गराउने के उद्देश्य हो ? सबभन्दा पहिले यसबारे स्पष्ट हुुनुपर्छ ।’ बैठकमा गुरुले चार विकल्प पेश गरे । पहिलो हो, पक्षमा उभिने । दोस्रो हो, विपक्षमा जाने र असफल पार्ने । तेस्रो हो, राजीनामा गराउने र चौथो, अदालतको निर्णय पर्खिने । दोस्रो बाहेकका विकल्प भनिरहँदा गगनहरु मुख मिठ्याउँदै थिए । दोस्रो भनेपछि रामशरण हौसिए ।
वीरबहादुर बलायरहरुको चिन्ता बेग्लै । अहिले लोकमानलाई अख्तियारबाट गलहत्याउने कुरा रोक्न खोज्दा समस्या आउँछ भन्ने भएभरका कांग्रेस नेताले बुझेका छन् । कारण हो, केन्द्रीय समितिमा ९० प्रतिशत र त्यति नै संख्या संसदीय दलमा महाभियोग पक्षधरको छ । नियतमाथि प्रश्न उठाउने प्रकाशमान, रामशरण, वीरबहादुरदेखि गुरु घिमिरेहरुसम्मको चिन्ता लोकमानको बहिर्गमनसँग भन्दा बढी पदपूर्तिसँग देखिएको छ ।
लोकमान हटेलगत्तै अख्तियारमा अर्को प्रमुख आयुक्त पदपूर्ति गर्नैपर्छ । भएकैमध्येबाट एकजनालाई प्रमुख आयुक्त तोक्न पनि संवैधानिक परिषद् चाहियो । तर, अहिलेको ‘परिदृश्य’ पूरै कांग्रेस प्रतिकूलको छ । पदपूर्तिको सिफारिस त्यही परिषद्ले गर्ने हो । सिफारिस गर्ने उक्त संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री हुन्छन्, जो माओवादीका हुन् । सभामुख माओवादीकै छिन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भइहाल्यो । प्रधानन्यायाधीशको के भर ? सरकारले तोकेका दुई मन्त्री त्यहाँ हुन्छन् । माओवादीले आफ्नो एक र कांग्रेसको एक पठाउला । यसरी पनि ६ मा एक कांग्रेस बसेर गरिने सिफारिस पार्टी प्रतिकूल हुने नै भयो । कांग्रेस बैठकमा पटक–पटक उठेको कुरा हो कि, ‘कांग्रेस सिध्याउने खेल यहाँ चल्दैछ ।’
कांग्रेसमा धनराज, विश्वप्रकाश, गुरु, बद्री, गगन, प्रदीप पौडेलहरुले जे बोले पनि कांग्रेसभित्र नीति निर्माणको तहमा यी कसैले दखल राख्दैनन् । कांग्रेसमा ०१५ सालका सांसद चार जना जीवितै छन् । ०४८ का त कति हुन् कति † यो हिसाबमा लोकमानपक्षधरको संख्या बाक्लो हुने नै भयो ।